I-MDID - # 1 Ugcino lweDatha yokuLungisa isixhobo seZonyango | Plum emangalisayo
Ngee-surges zeCovid-19 kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela zikhule ngamandla kwaye ngequbuliso zifuna izixhobo zonyango (njengee-ventilator kunye nezinye izixhobo). Oku kuye kwaveza isidingo sendlela yokulungiselela ngcono, yokufumana kunye nokwenza ingxelo ngezixhobo zonyango kuzo zonke iimeko ezingxamisekileyo.
I-MDID yingcali, ayinakudla, ayibizi (SIMAHLA unyaka wokuqala) kwaye isisombululo esigqibeleleyo sezibhedlele kunye nezixhobo zophando ukuhlangabezana naloo mfuno. I-MDID inokulandelela, uluhlu lweempahla, ibhakhowudi, ukulungiswa, isabelo / irente / imali mboleko, ishedyuli, ingxelo, ukujonga / ukuphuma kwezixhobo zonyango.
I-MDID iyafumaneka kuzo zonke iikhompyuter, ii-smartphones kunye neetafile kunye nakwiwebhu jikelele ye-24/7. Kulula ukuyisebenzisa kwindawo enye okanye kwiindawo ezininzi.
Iziko ledatha yoGcino lwezixhobo zoNyango (MDID)
I-MDID idibanisa Ulwazi
Zonke izixhobo, ulwazi lwehardware, ishedyuli, imbali, ukulungiswa, kunye neengxelo zonke kwindawo enye efanelekileyo. Ikhangelo lwalo naluphi na ulwazi.
✓ Kulula ukubakho kwiMveliso yeXabiso
Track Ukulandelela okunamandla kweLizwe
Ukushicilelwa kwekhowudi ye-Bar kunye ne-QR kunye nokuskena
MAHHALA kulo nyaka
Track Ukulandelela okunamandla
Iqonga lomnqamlezo-Windows, Mac, iOS, Android kunye neWebhu esekwe.
Kutheni usebenzisa Ugcino lweDatha yeLungelo lokuKhangela?
Ukwenza i-Akhawuntingi, ukulandela umkhondo, uluhlu lwempahla, ibhakhowudi, ukulungisa izinto
Yabelana / Ukuqasha / ukubolekwa imali, ishedyuli, Yenza iiNgxelo, Jonga / uphume izixhobo zonyango.
UMOYA: Indawo yedatha isimahla kulo nyaka
Gcina lonke ulwazi kuzo zonke izixhobo, iinxalenye, iimanyuwali, zonke zidibene, zisexesheni, zikhuselekile kwaye zikwindawo enye.
Icon 3Yenziwe nge Sketch.
Ukufikelela, Nangaliphi na ixesha, naphi na
I-MDID inokusetyenziswa kwikhompyuter enye, inethiwekhi iLAN, iseva yendawo, ingingqi, ilizwe okanye kwihlabathi liphela.
Ngokuqala kwe-Covid-19 yeza ibango elingafunekiyo kwihlabathi liphela lezixhobo zonyango kunye nezixhobo. Izibhedlele zazongxwelerha ngexesha lolu bhubhani. Ngokukhethekileyo i-ventilators zazifumanekile kwaye njengoko inani lamatyala aqinisekisiweyo kunye nokunyuka kwesibhedlele kuye kwanda. Ummandla omnye unokunqongophala kwaye omnye unokuba nokugqitha. Ukusombulula le ngxaki kuVimba weDatha yokuKhangela izixhobo ze-Medical Medical METD (METD ngamafutshane) yenziwa.
I-METD-Esi sisiseko sedatha esingabalulekanga kwiinkampani ezinoluhlu olukhulu lwezixhobo zonyango kunye namayeza. I-MEDT ivumela umbutho onenani elikhulu lezinto zonyango (izixhobo zokuphefumla, izixhobo ezikhuselayo (PPE), amayeza, njl.njl.ukugcina uluhlu lwayo, ukuboleka okanye ukurenta, i-invoyisi, ikhowudi yebar, ukujonga ngaphakathi / ukuphuma, ukwenza ingxelo, umkhondo, ikhowudi ye-bar / ikhowudi ye-QR kunye nokuprinta kunye nokuskena usebenzisa izikena zamazinyo eziluhlaza nokunye.
Le datha ivumela inkampani yokuqeshisa ngezixhobo zevidiyo ukuba ivelise, irente, i-invoice kwaye ilandele izixhobo kuwo onke amanyathelo enkqubo. Ivumela ukwenza irente ngokukhawuleza, ngokungaguquguqukiyo nangempumelelo.
Ngale datha kunokwenzeka ukuba urhulumente wobumbano okanye urhulumente asete izixhobo zokugcina zonyango ukuze anikeze ilizwe liphela, ingingqi okanye ilizwe. Umzekelo ubhubhane unokufuna amanani amakhulu ezinto zokuphefumla. Ibango liza kumaza avela kwiindawo ezahlukeneyo. Kutheni le nto amawaka omoya angenasetyenziswanga abekwe esibhedlele? Ngoku landela into nganye yonyango ngaphakathi nangaphandle, yindawo, ngubani oyisayinileyo kwaye ngaliphi ixesha, sesiphi isigulana esisebenzisa loo matshini. Yabelana okanye uqeshise izixhobo, zilandele umkhondo ukuba uphume ixesha elifutshane kunye nexesha elide Eyona nto ilunge kakhulu, khangela kwaye ufumane nayiphi na into ngokukhawuleza. Kwangoko fumana iingxelo. Esi sisiseko sedatha yezixhobo zonyango kwishishini lezonyango.
Iziko ledatha le-METD lisekwe kwindawo edumileyo, enamandla, kwaye kulula ukuyisebenzisa ekugcinweni kwedatha yeFayilem ukuba isebenze kwi-Mac, Win, iOS, Android njengomthengi. KwiWebhu xa iqhutywa kwiSermaker Server. Sebenzisa kwiseva kwiwebhu ukuze usebenze kuzo zonke izixhobo. Njengoko ukhula kwaye iimfuno kunye neempahla zakho zikhula, iziko ledatha linokukhula. Inkqubo ingenziwa ngokupheleleyo.
uninzi Iinkqubo eziphambili zokugcina irente iyafumaneka thatha "inkqubo enye ilingane yonke" indlela efuna ukuba abathengi bahlengahlengise iinkqubo zabo kwisoftware. Sifumanise ukuba iintlobo ezahlukeneyo zamashishini aqeshisayo zihlala zinemodeli eyahlukileyo yeshishini.
Eminye imimandla yokusebenza enokuhluka ngokungafaniyo ibandakanya inkqubo yokudala iikowuti, ulawulo lweempahla, umboniso weemveliso zabathengi kunye nokuhlelwa kwezinto.
I-MDID kubandakanya ukubanakho ukulawula izixhobo, iindawo, ukuveliswa okuzenzekelayo kwee-odolo zomsebenzi wokuhambisa kunye nee-invoice, i-imeyile edityanisiweyo yezikhumbuzo kunye nee-invoice, ulawulo lwempahla kubandakanya amaqela aguqukayo wezinto zoluhlu kunye nokudityaniswa "kokulahleka nokonakala" kokulandela umkhondo kunye nokwenza ingxelo.
Ukucombulula iingxaki, ukukhulisa imveliso
Ugcino lweDatha yezixhobo zoNyango
Landa umkhondo wezixhobo kwizibhedlele ezininzi, iikliniki, amaziko ophando kunye neeyunivesithi
Uluhlu lweempahla kunye neeNgxelo
Xa ujonga uluhlu lweempahla kunye neeNgxelo zibonelela ngokukhawuleza kwinto edlulileyo, yangoku kunye nokufumaneka kwesixhobo sexa elizayo
Rekhoda yonke intengiselwano yemali ephathelele kwizixhobo zonyango kwindawo ethile
Iziko ledatha linika ihabhu yokucwangcisa izicwangciso zokuqinisekisa ukhuseleko kwizigulana.
Iifoto zesixhobo kunye namalungu agcinwe kwirekhodi nganye, lula ukwazisa.
Umbutho kunye nendawo yazo zonke ii-metadata ezihambelana nesixhobo sonyango
Umqambi wefayile ophezulu
Ubomi buxhomekeke kuyo
Fumana izixhobo xa kufuneka
Ukucwangciswa = Impumelelo
Vavanya namhlanje i-MDID
Khuphela kwaye uvavanye kwi-Mac okanye kwiWindows
Okanye ucele isixhobo esikwi-Intanethi
Nxibelelana nathi Apha ukufumana Iinkcukacha
le lawulo lwezinto Inkqubo ebandakanya ukufaka iikhowudi kwiintlobo ezahlukeneyo
Ukwenza ngokwezifiso ifumaneka nangaliphi na ixesha ebomini benkqubo yenkonzo efanelekileyo.
Amaxabiso- Imigaqo yokusebenzisa
Isicelo sisimahla ngexesha le-COVID-19 Callen. Kusimahla kude kube nge-31 ka-Agasti ka-2021.Ekupheleni kwexesha elisimahla, abasebenzisi banokuthenga ukufikelela okuqhubekayo ngokusebenzisa iwebhusayithi yePlum emangalisayo. Amaxabiso ayahluka kwimibutho engenzi nzuzo.
Ngexesha lamahala, ukulungiswa kwe-bug kufakiwe. Isiphazamisi sichazwa njengomcimbi kunye nesicelo seFayileMaker Pro, hayi imeko ekungingathwe kuyo kubandakanya inkqubo yokusebenza, isoftware yesoftware, ukumiselwa kwekhompyuter, njl. Njl. Isicelo asizukusebenza nohlobo olungalunganga lweFayileMaker. (Jonga iiMfuno zeNkqubo.)
Izicelo zoLungiso ezinjengeenguqu ezincinci zinokucelwa ukuba ngaba ziluncedo endaweni yonke. Isicelo siya kuvavanywa ubunzima kunye nokuzama. Umphuhlisi uya kuthatha isigqibo sokuba utshintsho lungabandakanywa.
Ixabiso lezorhwebo: Mahala unyaka
Ixabiso lemfundo: Mahala unyaka
Uqeqesho (ukuba luyafuneka): Mahala unyaka
Support: Isimahla iinyanga ezimbini
Nceda ungathandabuzi ukufikelela ekubeni umbutho wakho unemibuzo okanye ufuna iinkonzo ngokubhekisele kwi-MDID okanye kolunye uhlahlo lwedatha yeFayileMaker. Yile nto siyenzayo.
Iziko ledatha elilungileyo linokukunceda ucwangcise isibhedlele sakho, uxinzelelo olusezantsi kunye neemfuno kwiingcali zakho. Iziko ledatha elifana ne-MDID libonelela ngokuhamba okulula, okuqhelekileyo kokuhamba komsebenzi okunika ulungelelwaniso kunye nokuzenzekelayo kulwazi olunokuba lolunye uhlobo lwesiphithiphithi. Iitoksi zibiza imali.
Buza nje kwaye sinokuphendula imibuzo yakho. Nxibelelana nathi apha yesicelo.